के.ए.पी. – यी तीनमध्ये दुई अक्षरमा नेपाली धनी छन्, एउटामा गरिब छन् – HamroKatha
के.ए.पी. – यी तीनमध्ये दुई अक्षरमा नेपाली धनी छन्, एउटामा गरिब छन्
खाएर मात्र औषधी हुँदैन, व्यवहार र असल अभ्याश नै सबैभन्दा ठूलो औषधी हो ।
डा. नागेन्द्र महतो २०७४ माघ १ गते ११:०६
स्वास्थ्यको मामिलामा हामी नेपाली धेरै पछाडि छौं । हामीले नजानेको होइन, धेरै जानेका छौं । नेपालीहरुको नलेजको स्तर राम्रो छ । ज्ञानलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक छ । तर, व्यवहार अर्थात् प्राक्टिसको मामिलामा नेपाली कमजोर छौं, गरिब छौं ।
यही कुरालाई व्याख्या गर्न के.ए.पी. को कुरा ल्याइएको हो । यो के.ए.पी. तीनवटा अक्षरले बनेको छ ।
-के भनेको नलेज अर्थात् ज्ञान हो ।
-ए भनेको एटिच्युड अर्थात् नलेज प्रतिको अवधारणा हो ।
-पी भनेको प्राक्टिस अर्थात् व्यवहार हो ।
तीन अक्षरमध्ये दुई अक्षरमा हामी नेपाली धनी छौं । हामी धेरै कुरा जान्दाछौं । खासगरी स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराहरु धेरै नै जान्दछौं । हामीमा प्रचुर ज्ञान छ । हामी धूमपान गर्न हुँदैन, मदिरा सेवन गर्न हुँदैन भनेर सबैलाई सम्झाउन सक्छौं । खाना खानु अघि हात धुनुपर्छ भन्छौं । बासी र फोहोर खाना खान हुँदैन भन्छौं । फोहोर गर्न हुँदैन, सफा हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ । के खान हुन्छ, के खान हुँदैन भन्ने हामीलाई थाहा छ । भन्नुको अर्थ हामीमा ज्ञान छ । त्यो ज्ञानलाई स्वीकार पनि गर्दछौं । ज्ञानप्रति सकारात्मक अवधारणा राख्छौं । तर जब ‘पी’ अक्षरमा आइपुग्छौं, हामी गरिब भइहाल्छौं ।
हामी सकारात्मक सोंच्छौं । ज्ञान जान्दछौं । तर हामी व्यवहारमा उतार्दैनौं । व्यवहारमा उतार्ने अर्थात् प्राक्टिसको मामिलामा हामी गरिब छौं । हामीले जे जानेका छौं त्यसलाई व्यवहारमा मात्र उतारिदियौं भने हामी नेपालीको स्वास्थ्य स्तर धेरै माथि उठ्छ ।
यो केएपी शब्दावली मैले मास्टर्स डिग्री गर्दा सुनेको हूँ । मैले त्रिविमै मास्टर्स गरेको हूँ । त्यहाँ मेरा सरहरुले यो केएपीको कुरा सुनाउनुहुन्थ्यो । नलेज र एटिच्युडमा हामी धनी छौं तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने मामिलामा गरिब छौं भन्ने भनाईले मेरो मन छोएको थियो । जब म थप अध्ययनका लागि जापान गएँ त्यहाँको प्राक्टिस अर्थात् व्यवहार धेरै समृद्ध पाएँ । सुनेका र जानेका कुरा व्यवहारमा उतार्ने मामिलामा जापानीहरु अग्रपंक्तिमा छन् । यही कारण जापानीहरुको स्वास्थ्य स्तर विश्वमै उत्तम मानिन्छ । उनीहरुको स्वास्थ्य स्थिति एकदम राम्रो छ ।
जानेका कुराहरु, जानेका ज्ञानहरुलाई व्यवहारमा उतार्ने हो भने हामी नेपाली पनि जापानी झैं स्वस्थ्य हुनसक्छौं । एकपटक सुनेको, एकपटक बुझेको कुरालाई जापानीहरु व्यवहारमा लागू गरिहाल्छन् । त्यसैले जापानीहरुको स्वास्थ्य स्थिति मात्र राम्रो छैन, औसत आयु पनि हाम्रोभन्दा धेरै छ ।
औषधीलाई बुझ्ने सवालमा पनि हाम्रो कमजोरी छ । हामी सफा बस्छौं भने त्यो औषधी हो, सफा बस्नु आफैंमा औषधी हो । जथाभावी फोहोर फाल्दैनौं भने त्यो पनि औषधी हो । हामी चुरोट रक्सी खाँदैनौं भने त्यो पनि औषधी हो ।
नेपाल वायुमण्डलीय दृष्टिले धनी छ, भौगोलिक, प्राकृतिक सबै दृष्टिले धनी छ । तैपनि नेपालमा प्रदूषण नै प्रदूषण छ । प्रदूषण यसरी बढ्दै जाने हो भने विकराल अवस्था आउन सक्छ । समग्र वायुमण्डलीय प्रदूषण नियन्त्रण गर्न नेपाली नागरिकले धेरै योगदान गर्न नसक्लान् तर सरसफाई गरेर हटाइने प्रदूषणले जनस्वास्थ्यलाई धेरै फाइदा गर्छ ।
सफा बसौं, आफ्नो घरआगन र टोल सफा राखौं, सडकमा फोहोर नफालौं । यति मात्र गरे पनि स्वास्थ्यमा धेरै सुधार हुनसक्छ । मेरो कारणले फोहोर नहोस्, मेरो कारणले प्रदूषण नहोस् भनेर हरेक नागरिकले चिताउने र अठोट गर्ने हो भने नेपालीको स्वास्थ्य स्तर धेरै माथि उठ्न सक्छ ।
विरामी भएर औषधी खानु भन्दा विरामी नै नहुनु राम्रो हो । यो कुरा सबैले बुझेका छन् । त्यसो भए विरामी नै नहुने काम किन नगर्ने ? त्यस अनुरुपको व्यवहार किन नगर्ने ? हामी सरकारले सफा गरिदेओस् भन्छौं । सरकार भनेको को हो ? हामी नै होइनौं र ? सबै विषयमा सरकरको मुख ताक्न हुँदैन । आफू र आफ्नो परिवेश सफा राख्न किन सरकारको मुख ताक्ने ? आफैं सफा रहन थालिहाल्ने, सफा गर्न थालिहाल्ने । अनि, जब फोहोर नै गर्दैनौं भने सफा गर्ने काम पनि धेरै गरिरहन पर्दैन ।
औषधीलाई बुझ्ने सवालमा पनि हाम्रो कमजोरी छ । हामी सफा बस्छौं भने त्यो औषधी हो, सफा बस्नु आफैंमा औषधी हो । जथाभावी फोहोर फाल्दैनौं भने त्यो पनि औषधी हो । हामी चुरोट रक्सी खाँदैनौं भने त्यो पनि औषधी हो । जानेका ज्ञानका कुरा आफूमा लागू गरेर अरुलाई पनि सिकाउँछौं भने त्यो पनि औषधी हो । खाएर मात्र औषधी हुँदैन भन्ने बुझ्नुपर्यो । व्यवहार नै सबैभन्दा ठूलो औषधी हो । असल अभ्याश नै सबैभन्दा प्रभावकारी औषधी हो ।
सबैमा मेरो विनम्र आग्रह छ, ज्ञानलाई व्यवहारमा उतारौं, स्वस्थ्य बनौं । व्यक्ति स्वस्थ्य भयौं भने मात्र समाज स्वस्थ्य हुन्छ, देश पनि समृद्ध हुन्छ भन्ने तथ्यलाई मनन गरौं ।
(त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डा. महतोसँग हाम्रोकथाले गरेको वार्तामा आधारित)